Ezikaqeda isizungu ngonyaka ka 2015 ( ingxenye yokuqala) | Eyethu News
Ezikaqeda isizungu ngonyaka ka 2015 ( ingxenye yokuqala)
Ezosaziwayo ezihambe phambili ku 2015.
UBonang "Nomvula" Matheba.
UBonang Matheba ube ngundabuzekwayo kulonyaka izikhathi eziningi. Kuqale kwaphuma ukuthi uthandana nomculi wase Nigeria uD’Banj nokuthe kungazelele muntu kwavela ukuthi ubentshontshana no-AKA cishe izinyanga ezinhlanu ngesikhathi uDj Zinhle esakhulelwe. Indaba kaBonang no AKA yabhadlazwa uDj Zinhle kwi-blog yakhe ayiqale kade esakhulelwe indodakazi yakhe u-Kairo. Kuze kube manje uBonang no AKA basayiphika eyokuthandana kwabo yize benokubonakala behamba eminye imicimbi ndawonye. Udaba lukaBonang lumdalele amazinyo abushelelezi kwabanye besifazane abangosaziwayo njengoba uPearl Thusi yena akubeka kwacaca ukuthi esesayidini likaZinhle.
Ubani ongakhohlwa udaba luka Sifiso Ncwane wodumo lwengoma ethi ‘Kulungile Baba’ – USfiso Ncwane uthole ukugxekwa kakhulu emuva kokuthengela umfundisi wakhe isipho sonyanyavu lwemoto yohlobo lwe-Mercedes ebiza uR1.9 million. Izinkinga zikaSfiso ziqale ngesikhathi unina uFikile Ncwane eveza ukuthi uSfiso soloku agcina ukumondla ngoFebhruwari nonyaka. Unina kaSfiso owayekhala dli wasola umalokazane wakwakhe u-Ayanda ngoqhekeko olukhona phakathi kwakhe nendodana yakhe. USfiso wagcina ngokuveza ukuthi kubo kunezilwane okuyizona ezenza angafuni unkosikazi wakhe nezingane bajwayele ukuvakasha khona. Waphinde wasabisa nangokushintsha isibongo sakhe abe ngowakwaZikhali okuyisibongo sikababa wakhe.
Uqale kabi unyaka kwezikaqeda isizungu njengoba lowo owabe eyilunga leqembu lomculo we-Hip Hop kuleli iSkwatta Kamp uFlabba Habedi agwazwa wabulawa intombi yakhe uSindisiwe Manqele. UManqele ulahlwe yicala lokubulala ngenyanga kaDisemba kanti kulindeleke ukuba agwetshwe ngenyanga kaMashi wonyaka ka 2016. Ijaji uSolly Sithole latshela uManqele ukuthi alimkholwa uma ethi wagwaza uFlabba ngoba ezama ukuzivikela.
Umrepha wakuleli oyintandokazi uCassper Nyovest ube nonyaka omuhle kakhulu, lokhu emuva kokuqopha umlando ngokuba umculi wakuleli wokuqala ngqa ukugcwalisa iDome eGoli. I #FillUptheDome kaNyovest ibe nesasasa elimangazayo njengoba wagcwalisa iDome ngabantu abangu 20 000 okuyinto ebijwayele ukwenzeka kuleli kuphela uma kuvakashe abaculi baphesheya kwezilwandle. Ikhonsathi le-Fill Up The Dome lenzeke mhlaka 31 Okthoba kanti ababelihambele babuya bengawuvali umlomo.
Kulonyaka isicoco sama Idols sihambe nesizwa yaseMpumalanga uKarabo Mogane. Ukuwina kuka Karabo kwamangaza abantu abaningi njengoba base bezitshela ukuthi kuzowina intokazi yaseLimpopo ayesesele nayo uMmatema Moremi. UKarabo uwine lomcintiswano ngamavoti angaphezu kuka 16 million. Phakathi kwemiklomelo yakhe wathola isamba semali engu 700 000 kanye nemoto yohlobo lwe-Ford Feista.
Usomahlaya wakuleli ugile izimanga phesheya kwezilwandle emuva kokuqokwa njengomethuli omusha wohlelo olusakazwa cishe umhlaba wonke iThe Daily Show. Loluhlelo uluthathe ezandleni zika Jon Stewart obesethule iminyaka engu 16. UTrevor njengoba bekulindelekile uke wangathandisiswa abanye bababukeli baseMelika abamsole ngokweba amahlaya abantu. Kodwa manje izinto zibukeka zimhambela kahle njengoba eseze wathola nentombi khona eMelika.
Indima yezomculo iphinde yagqemeka enye ingozi ngokudlula emhlabeni komsunguli wamaSoul Brothers uDavid Masondo. UMasondo udlule emhlabeni ngenyanga ka Julayi nonyaka eshiya ngemuva izingane zakhe ekubikwa ukuthi zingaphezu kwa 20. UMasondo waduma kakhulu kumaSoul Brothers ngengoma ethi ‘Mama ka Sbongile’. UMasondo oke wakhulela endaweni yaseHowick ungcwatshelwe eHammarsdale lapho kade enomuzi khona.
SHADRACK NGEMA, ROLAND MQWEBU
Ezikaqeda isizungu ziphinde zagqemeka enye ingozi futhi ngokudlula emhlabeni kwezinsizwa ebezidume kakhulu emdlalweni wamahlaya ‘Emzini wezinsizwa’. URoland Mqebu owayedlala indawo ka Mkhize udlule emhlabeni ngo Agasti nonyaka emuva kokuphathwa yizinso. UShadrack Ngema yena obedlala indawo kaMagubane ushone ngenyanga kaDisemba emuva kokuphathwa isifo senhliziyo.
BUHLE MKHIZE, MALUSI & NOMA GIGABA
Olunye udaba oluke lwathanda ukushuba kulonyaka yilolo oluthinta ungqongqoshe wezaseKhaya kuleli uMalusi Gigaba, unkosikazi wakhe uNomachule kanye nothi ubeyintombi kangqongqoshe uBuhle Mkhize. UMkhize umbule ungqongqoshe izinqa ngesikhathi enekela umhlaba wonke ngokuthandana kwabo athe kuqale ngaphambi kokuba ungqongqoshe ashade ezinkundleni zokuxhumana. Isimo sithande ukushuba emuva kokuthi unkosikazi kaGigaba ekhwele wadilika kuBuhle emubiza ngeseqamgwaqo esineziqhomo ezimuncu esilandela indoda yakhe.
Ubani kodwa ongakhohlwa umhlola owawugqokwe uL’vovo Derango emcimbini we Vodacom Durban Julay kulonyaka. Nginesiqiniseko sokuthi zonke izazi kwezemfashini zavumelana ngazwilinye ukuthi uDerango uyena owaphuma eceleni kulomcimbi. Engingakusho nje ukuthi uL’vovo akashintshe umsiki wengqephu yakhe ngoba umbukanise nabantu kulonyaka, okunye nje sicela afunde ukugqokela umzimba wakhe angavele ahlanganise izindwangu.
BUKA: Ulinde iminyaka ukugcwaba ingane yakhe